Nhau - Vaviri vagari veBordentown vanowana Mukadzi Scout Goridhe Mipiro
Hwehudiki hwekutsvaga kwakakonzera kubudirira kwevakadzi vaviri veBordentown.
Alison Wall naEmily Wheeler, avo vanga vachinetsekana nevekwavo veMukadzi Scout mauto pamwechete kubvira kukireshi, vapedza zvirongwa zvavo zveGold Award, mubairo wakanakisa unowanikwa mukati mehurongwa hwekuvandudza manejimendi pasi rose hwemadzimai.
Ivo ve2 vari kupinda mune avo vakuru yr wepamusoro chikoro paBordentown Dunhu Rakawandisa Ruzivo uye vakaratidzira pamakore avo ebasa rakaoma uye rinonakidza neWomen Scouts.
Wheeler aive akamira mukati meMukadzi Scouts naamai vake, zvichitevera tsika yakadzora yekubata mumba make. Hanzvadzi yake yehudiki, amai, vanambuya naambuya vakanaka vese vane hanya, akadaro.
Wheeler's Goridhe Mubairo kupokana "Akanaka ma Wheelers" akaitwa pamusoro pemakore maviri-nguva kubva kubva mwaka wezhizha mainini kupinda kwake sophomore yr kudonha 2019.
Chinangwa chedambudziko rake chaive chekukurudzira uye kudzidzisa vanhu nezve kuchengetedzwa kwemabhasikoro, nekusimudzira kudzokorodza mabhasikoro asina kushandiswa kana ekare.
Akatsunga kuongorora musoro wenyaya uyu nekuda kwekuti iye anoziva kwekutanga ruoko izvo kushomeka kwekuchengetedzwa kwemudhudhudhu kungareva kune veimba. Babamunini vake vaive vaita tsaona mbiri dzemabhasikoro, imwe yacho yaive kubudirira uye kumhanya nemotokari. Kunyangwe apora kubva mutsaona dzake, Wheeler akatsanangura kumanikidza mamiriro akaiswa pamhuri uye kuti "zvainetsa kwazvo kuitiswa."
"Ndinotenda chinhu changu chakakosha kungova nekuziva zvakanyanya, uye nekungogovana chirevo chekuti kwakakosha sei kuchengetedza bhasikoro uye ndinovimba kuti inogona kuve nekwanisi yekutakura kuziva kukuru kwekukosha kwazvo," Wheeler akataura. "Nekuda kwechitima chinotyisa. Chakanakira mhepo. Asi kana vanhu vasiri kuzviita zvakachengeteka, saka hapana padanho rekuzviita."
Kushambadzira kuchengetedzwa kwemabhasikoro uye kuziva, Wheeler akaronga uye akatora chikamu mumabhasikoro eboka mashanu neboka reBordentown Township Police Bike Patrol. Aya makwikwi akaunzwa mune vangangoita makumi maviri vanhu pachiitiko uye yakanangana nekuraira vatasvi vematanho ese hwaro hwemugwagwa uye nenzvimbo yekusangana mutaundi.
Kuti azvirovedze pamagadzirirwo emabhasikoro, Wheeler akanyorera rubatsiro rwemhuri shamwari yakanaka muridzi isingabatsiri muAsbury Park. Amai va Wheeler vakashanda muAsbury Park uye vaizomutyaira kuenda kuChipiri Hupenyu Mabhasikoro aKerri Martin. Ikoko akaona nzira yakanakisa yekugadzirisa mabhasikoro, kuchinja matai uye kuona chinangwa cheasina purofiti chichifamba - kutora mabhasikoro asingadiwe uye kuagadzirisazve kana kuagadzirisazve kune mumwe munhu uyo ​​mune chero imwe nyaya aisakwanisa kutenga bhasikoro.
Pakupera kwedambudziko rake, Wheeler akabatsira kuwana angangoita makumi maviri nemashanu emabhasikoro akapihwa kubhizinesi raMartin.
Wheeler akabatsira kuronga magungano pakuchengetedza bhasikoro kuClara Barton Elementary Faculty uye Peter Muschal Elementary Faculty. Aikwanisa kuwana mutauri kubva kuCross Nation Connection, inoroja bhasikoro uye mutambo wemitambo, kuti apinde magungano uye kazhinji kacho ave chikamu chake panguva yake yekuzvitaurira pagungano.
Wheeler aipinda mitambo yemuno nemitambo yekugovana ruzivo rwake rwekuchengetedzwa kwemidhudhudhu uye kuchengetedza pamwe neboka. Muna 2018 na2019, akabata matafura edata pamakwikwi eguta Asina Kuziva Kutendeseka uye Kudonha, pamusoro pechiitiko chemusi weboka muChesterfield.
Akagadzira trivia mitambo yemavhidhiyo, goodie mukwende uye akasiyana mapaipi, pamwe neanoratidzira uye maheti emabhasikoro, kukwezva vanhu kuti vadzidze kuchengetedza bhasikoro nedambudziko rake.
Munguva yese ya2019, akaenda kumusika wevarimi weBordentown Metropolis pane zviitiko zvakawanda.
Paive pamusika wevarimi veguta guru Wheeler naWall vakagovana tafura yedata kuti vataure kuboka nezvezvirongwa zvavo nekubatana kwavo neWomen Scouts.
Wall's yegore rose yeGold Award mubairo, "Ita Kunze kweMunda," yakasanganisa kushingairira kwake kwemitambo uye kuda kuziva mukutengesa kugona kwekutaurirana muvechidiki.
Akagadzira kurovedza muviri kurongedza midziyo yevechidiki kubva kumakireshi kindergarten kusvika 3rd. Mukati memidziyo yekurongedza, Wall vakaita makadhi ekutamba asinganetsi airatidzira akasiyana mamiriro ehukama ayo vana vangatarisana nawo kuchikoro. Vanokumbira vechidiki kuti vazvibate kunze kwezviitiko uye vagovane mhinduro mukuyedza kudzidza kutaurirana.
Midziyo yekupakira yakapa zvipfeko uye matoyi ekuperekedza nzvimbo yekuratidzira makadhi.
Aikwanisa kuwana matatu ekurongedza mumidziyo kuPeter Muschal Elementary Faculty, maviri kuClara Barton Elementary Faculty uye mumwe kuLawrence Elementary Faculty yemapakeji ake ekuchengeta.
Madziro akashanyira masimba kuti ajekese dambudziko rake uye kukosha kwaro kumapakeji ekuchengetedza uye vechidiki. Aizouya zvakare nekudzokorora uye nekuwedzera uye achayeuka kufara kwaungaita vana kumuona.
"Ndicho chinhu chimwe chakandisimbisa kuti dambudziko iri raive rakakanganisa sei kune vashoma vevana ava," akadaro.
Kunyangwe aive achifunga mazano kubvira iye achangotanga yr, 2017, iro dambudziko rakazadzikiswa kubva munaNdira 2019 kusvika Kukadzi 2020.
"Ndinotenda ndakatanga ndanyatsonzwisisa kuti Goridhe Award yaive chii zvakare mugiredhi rechishanu kana zvakadaro," akadaro Wall. "Uye kubvira ipapo ndanga ndakafanana," Ndicho chinhu chimwe chete chandinoshuvira kushanda kuti ndiwane. "Ndicho chinhu chimwe chete chandinoshuvira kuva nechinangwa chenguva refu."
Chinangwa chake chaive chekusabatsira chete vana kuti vashande nenzira yemagariro asi nekuwedzera hunyanzvi yemitambo nekuita pamwe kwenguva yepamberi.
"Kufemerwa kwakauya pano kubva kune hunyanzvi hwepachivande kubvira sezvo theatre yanga ichindipa mhinduro yekuzvimiririra ini," akadaro Wall. "Uye ndinoziva kuti vanhu vazhinji vanga vatambura kutora matanho kunyanya nekuda kwekuwanikwa kwehunyanzvi uye nzira vanhu vazhinji mazuva ano vangave nezvakanyorwa pane kuenda kunotaura kune mumwe munhu musoro kumusoro. Saka ini ndaifanira kubatsira vechidiki vechidiki kukura aya masimba akakosha ekutaurirana nepo achivapa mukana wekuzvinyatso. ”
Madziro anga aine hanya nezvigadzirwa zvemitambo kubva padanho repakati. Kugadzira kwake kwekupedzisira yaive yechikoro chepamusoro chikoro chemumhanzi 9 kusvika mashanu muna Kukadzi iyi yr. Zvekugadzira izvi, aive nehanya ne "yega mhedzisiro yesystem" - iyo ensemble, vashandi vebasa, mapepa uye kumisikidza kusimudzira.
Seboka, Wheeler neMadziro vakapedzisa yavo yekutanga Bronze neSirivhi Mubayiro pamwe chete. Uye Wheeler uye Wall vanogovana zvakakura kupfuura hushamwari hwavo uye kubatanidzwa muTroop # 23921. Mumwe nemumwe amai vavo vanobatana-nevatungamiriri veboka rake.
Vari kuzvigadzirira iye wekupedzisira yr wepamusoro chikoro uye kugadzirira kupinda muchikoro. Madziro ari kushandisa emakoreji ayo anopa zvakakomba mukutonga kwechitsauko nekuda kwekuda kuziva kwake munhandare uye nevanhu. Wheeler anofarira zvebhizimusi, pamwe mune dhizaini kushambadzira, uye anotarisira kumhanyisa yake yakasimba mune ramangwana.